China Custom aluminium Extrusions Abavelisi kunye Factory, ababoneleli |Iimveliso zesinyithi
Izandiso zeAluminiyam yeSiko-Abenzi, iFactory, ababoneleli abavela eTshayina
Izisombululo zethu zithathwa ngokubanzi kwaye zithembekile ngabathengi kwaye zinokuhlangabezana ngokuqhubekayo nokuguqula iimfuno zemali kunye nezentlalo kwi-Custom Aluminium Extrusions,Iprofayile yentsimbi yeeMilo eziKhethekileyo, Iiprofayili ezizotyiweyo ezibandayo, Iprofayile yeAluminiyam yokuhombisa,IiProfayili zeAluminiyam zePaneli yeSolar.Sikholelwa ukuba uya kwaneliseka ngexabiso lethu elifanelekileyo, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza.Sithemba ngokunyanisekileyo ukuba ungasinika ithuba lokukusebenzela kwaye ube liqabane lakho elilungileyo!Imveliso iya kubonelela kulo lonke ihlabathi, njengeYurophu, iMelika, i-Australia, i-Amman, i-Indonesia, i-Mauritius, i-Montreal.Sineminyaka engaphezu kwe-10 yamava emveliso kunye neshishini lokuthumela ngaphandle.Sihlala siphuhlisa kwaye siyila iintlobo zeemveliso zenoveli ukuhlangabezana neemfuno zentengiso kwaye sincede iindwendwe ngokuqhubekayo ngokuhlaziya iimveliso zethu.Singabavelisi abakhethekileyo kunye nabathumela ngaphandle eTshayina.Naphi na apho ukhoyo, nceda usijoyine, kwaye kunye siya kubumba ikamva eliqaqambileyo kwishishini lakho!
IiVideos eziNxulumene neAluminiyam yeSiko kwiYoutube
Ngesimo sengqondo esilungileyo "ngokubhekiselele kwimarike, jonga isiko, jonga isayensi", inkampani isebenza ngokukhutheleyo ukwenza uphando kunye nophuhliso.Ndiyathemba ukuba sinobudlelwane beshishini elizayo kunye nokuzuza impumelelo efanayo.
Abasebenzi bobugcisa bomzi-mveliso basinike iingcebiso ezininzi ezilungileyo kwinkqubo yentsebenziswano, oku kuhle kakhulu, sibulela kakhulu.
Umgangatho olungileyo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo, kuhle kakhulu.Ezinye iimveliso zinengxaki encinci, kodwa umthengisi utshintshile ngexesha, ngokubanzi, sanelisekile.
Umphathi weNtengiso unomdla kakhulu kwaye unobuchule, usinike imvume enkulu kunye nomgangatho wemveliso ulunge kakhulu, enkosi kakhulu!
Ummeli wenkonzo yabathengi uchaze ngokucokisekileyo, isimo sengqondo senkonzo sihle kakhulu, impendulo ifike ngexesha kwaye ibanzi, unxibelelwano olonwabileyo!Sinethemba lokuba siza kuba nethuba lokusebenzisana.
Umntu othengisayo uyingcali kwaye unoxanduva, ufudumele kwaye uhloniphekile, saba nencoko emnandi kwaye akukho miqobo yolwimi ekunxibelelaneni.
Photovoltaic Al Icandelo
IiProfayili eziKhethekileyo zeAluminiyam yokuKhulisa
Iprofayile yentsimbi yeeMilo eziKhethekileyo
Umenzi wegumbi lokutshayela
Al Extrusions Profile
Umbhobho weAluminiyam weHexagon
Umboneleli weProfayili yeAluminiyam